जसले हिमाल चढ्ने शेर्पालाई नयाँ पहिचान दिलाए (भिडियोसहित)
गत वर्षको एक रात उनको सपनीमा सन् २००३ मा इन्डो–नेपाल आर्मी एक्स्पोमा भाग लिँदाको एउटा घटना सर्लक्क आयो। अन्तर्राष्ट्रिय गाइड भएपछि उनको त्यो पहिलो हिमाल आरोहण थियो। उनी विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथामा गाइडको रूपमा छानिएका थिए। १६ वर्षअघि नेपालको दक्षिणी मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर फर्किने
मुगु डायरी -३ जुम्ला बजारबाट सोझै रारा पुग्ने गाडी छुट्दैनन्। सिंजा गोठी जिउला पुगेर मुगुका लागि गाडीको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यहाँ तुरून्तै जाने गाडी पाउँन लगभग असम्भव नै हुन्छ। त्यसैले सिंजा ग
कणार्लीमा कहिलेसम्म चामल राजनीति ?
मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको किताब ‘समृद्ध कर्णालीको दुःख’ मा कर्णाली गरिब हुनुको कारण केलाउने कोसिस गरिएको छ। किताबको सार छ, ‘कर्णाली गरिब भएको चामलले हो।’ खाद्य संकटको नाममा साविकको कर्णालीका पाँचै जिल्लामा सरकारले दया गरेर खाद्य संस्थान सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यही निहुँमा
लाहुरे श्रीमतिको पीडा– जवानीमा लोग्नेसँग छुट्टिएर बस्नु पर्‍यो, अहिले छोराहरूसँग (भिडियोसहित)
गोर्खा मुद्दा संखुवासभाकी इन्द्रकुमारी राई। सन् १९८३ मा निकै दंग थिइन्। दंग नपरून् पनि किन? ७ वर्षपछि उनी आफ्नो ला
राज्यबाट उपेक्षित दार्चुलाको कथा–१ २०३२ साल भदौंको तेस्रो साता। नेपालको विकट जिल्ला दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाबाट एक हुल शौका जाति व्यापारका लाग
आमालाई सघाउन ७ कक्षा पढ्दादेखि काम गरिरहेका एक ठिटो (भिडियोसहित)
काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित ‘ट्रेडिशनल कम्फर्ट’ नामक बुटिक होटल पुग्दा जो कोहीले भेट्ने छन्, १९ वर्षीय एक ठिटो। जो हरदम अतिथिको सेवामा जुटिरहेको भेटिन्छन्। उनी होटलमा आउने अतिथिको स्वागतदेखि उनीहरूलाई आइपर्ने गाह्रो अफ्ठेरो सबै सोध्ने काममा जोडिन्छन्। पुजल चन्द ठकुरी, हाल सान ईन्
कथा लेखिएको पुस्तकको त्याे कथा
विक्रम वीर थापा सन् १९८३ मा मैले आफ्नाे पहिलाे उपन्यास विगतको परिवेशभित्र बनारसमा छपाउँदा पेन्सनबाट आएकाे सबै पूँजी खर्चेकाे थिए। म त्यति बेला बडाे उत्साही थिए। तर, मेराे उत्साह धेरै दिन टिकेन्। पुस्तककाे मूल्य राखिएकाे थियाे, २० रुपैयाँ। मलाई लागेकाे थियाे, आफ्नाे गाउँ परिवेशलाई लिएर